ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပြန်သာ ပြန်ပါ ရွှေဟင်္သာ”
Good tal byar. Thank you.
ကျနော်တောင် ခုလေးပဲ ပြောမိပြန်တယ် အကိုပေါ ရေး) လာလေ့လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
အလွန်ထိေ၇ာက် သော အတွေးအမြင် ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝ ထောက်ခံပါတယ်။
a yan yan ko kg tel ko paw, thanks naw
Yes Correct. That is what I want to say to those people.
phone gyi yuu nae hlay (boat luu) twe
Totally agree wz u KP, we also doingalittle bit of supporting to inside activists with my closed friends as we can bt problem is required to keep secrete so we hv so difficult to organize many people to participate,that's why I always expecting overseas groups to unite n set upawell organization which is able to get people's trust
Great post . Really, i'm appreciate you.
ဘာကိုပြောချင်နေတာလဲကို မသိဘူး ..
ကိုပေါ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ.. ဘာလုပ်ချင်တာလဲ .. သူများတွေကို အပြစ်ပြောချင်တာလား .. ` ငါ့လောက်ဘယ်သူမှ အသုံးမကျဘူး´ လို့ ဆိုလိုချင်တာလား ... စိတ်ကုန်ပ ဗျာ .
မျိုးမြင့်မောင် ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့် .. မြှောက်ပင့် ပြီး မပြောသေးပါလား
အခုလို သတိတရ တမ်းတပြန်တော့လည်း မအားတဲ့ကြားက လာရပြန်ပေါ့ကွာ။ အင်း ဘာပြောချင်တာလည်း မသိဘူးဆိုလည်း သဘောပေါက်အောင် သေချာထပ်ဖတ်ပါလား။ ဘယ်လောက်ဖတ်ဖတ် သဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင် မြန်မာစာဖတ်တတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ယေက်ကို ဖတ်ခိုင်းပြီး ရှင်းပြခိုင်းပေါ့။ နားလည်တာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့ မဆီမဆိုင် လမ်းလွဲချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ လာမေးနေတာတုန်း လဒူရဲ့။ မင်းတို့လည်း မဆူမဆဲဘဲ လွတ်ထားလေ ပိုဒူလာလေပဲ။
အဲ ပို့စ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ပြောရရင်တော့ ကိုပေါခေါင်းစဉ်က နည်းနည်းပျော့တယ်။ ကျနော်သာဆိုရင် "ပြန်ချင် ပြန်လေ လဒတွေ" လို့ပြောမှာ။
မျှော်နေကြတဲ့ လဒူတွေ လဒတွေ ဒီစာကို ဖတ်ပြီး သွေးတက်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါတယ်။
So rude! Myo Myint Mg
U never go school ?
So stupid, Anonymous.
You've got no brain?
SO ANGRY? MAY BE U HAVE NO BRAIN COS U ALWALYS SUPPORT SOMESONE WITHOUT THINKING. :)
Ko Myo Myint yae...
They are just addicted to "Barking " ;D
သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော် စိတ်မတိုပါဘူး။ ဟဲဟဲ ဘယ်လဒူတွေ ထွက်လာပြီး ဘာအသစ်အဆန်းတွေ ဆဲဦးမှာလဲဆိုတာ သိချင်လို့ ထပ်ဆွပေးကြည့်တာ။ အပျင်းများပြေမလားလို့ပါ။ မဆွံတော့ဘူးဗျ။ ဒီကောင်တွေ ကြာလေ ပိုဒူလေပဲ။ :D
ပြည်တွင်းကနေပြီး လုပ်တာ ပြည်ပကထက် အဆအရာအထောင် အသောင်း ထိရောက်တယ် ဆိုတာ မှန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခု စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လူတိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဟုတ်ဘူး။ ကိုမင်းကိုနိုင် မဟုတ်ဘူး။ နအဖအစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရတဲ့အရာမှန်သမျှ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရတာတွေ ချည်းပဲ။ နည်းနည်းစွန့်နိုင်တဲ့သူရှိမယ်။ များများစွန့်နိုင်တဲ့သူ ရှိမယ်။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လုပ်နေတာကို အပြစ်မပြောသင့်ဘူး ထင်တယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်း အများစုဟာ စင်ကာပူမှာပါ။ ကျနော်မေးကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူ မှ စင်ကာပူမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။ ဆိုလိုတာက လူတိုင်းမလုပ်ပါဘူး။ ဝါသနာမပါတာဘဲ ပြောရမလား။ ပျင်းတယ်ပဲ ပြောရမလား။ ကြိုက်သလိုသာ ပြောပါတော့။ အလှူငွေဆိုတာလဲ အခု ကိုပေါပြောသလို လစဉ်မပြောနဲ့ စင်ကာပူဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာတောင် မထည့်ဝင်ဖူးပါဘူး။ ဒါ အမှန်တရားပါ။ အဲဒါကို ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်က စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နေတဲ့သူကို အပြစ်မပြောသင့်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ပြောသာပြောနေတာပါ။ ဒီစာလဲ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ မဖတ်ပါဘူး။ ခါးတယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ အမှန်တရားပဲ။ ကျနော်တို့ အများကြီး လုပ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ တမီးလ်တွေက တိုင်းဂါးတွေကို ဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့ကြသလိုမျိုး ကျနော်တို့ ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ပထမခြေလှမ်းကို ကိုပေါ လှမ်းနေခြင်း လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျား
့မြစ်ဆုံ က မသုံးလုံး ကိုတော့ ကြမ်းတယ်ပြောပြီး ကိုတုတ်ကြီး ဆဲစာ ကျအားပေးလို့..တညိုးပါလား..
နောက်တခု..ကိုပေါ ဘယ်လိုလူတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ဒါမျိုးရေးသလဲဆိုတာ ဒီဘလော့က ကွန်မန့်တွေ ပုံမှန်ဖတ်ရင် အသိသာကြီးပါ..အားမလိုအားမရဖြစ်သူတွေကိုရည်ရွယ်တယ်လို့ နေ့တိုင်းလာဖတ်သူတယောက်အနေနဲ့ မခံစားရပါ..သူ့စာထဲမှာရေးသလို ပါးစပ်အရသာခံပြောနေသူတချို့ကိုသာရည်ရွယ်တယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ ကိုမျိုးချစ်ခေါ် ကိုလေပေါရေ
ကျနော် ကော်မန့်လေးတွေပဲ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျား မြန်မာပြည်ကို ခုပြန်ပီး စည်းရုံးရေးဆင်းလဲ ရပါတယ်။
တိုင်းပြည်ကောင်းစားရင် ကျနော်တို့ကို ခေါ်လိုက်ပေါ့ဗျာ.
ကျနော်တို့ လေလှိုင်းကနေ အားပေးထောက်ခံနေမှာပါ။
ဒါမှလဲ ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့ အင်ဂျင်နီယာတွေ သိက္ခာပိုရှိပေမပေါ့။
True... Now... whenever I read your politic post, I don't agree with most of the words that you said...
I feel you are scolding the Burmese from Singapore who do not do politic.
မြစ်ဆုံ နှင့် အမည်မသိ…သို့…
ကျနော်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို ကိုယ်ထင်မြင်ယူဆတဲ့အတိုင်း ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ရိုးသားစွာ ရေးသားတင်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြိုက်များမယ့်.. လူတိုင်းလက်ခံနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကိုချည်း ရွေးချယ်ပြီး ရေးသားနေခြင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပထမဆုံး သတိပြုစေချင်ပါတယ်။
ဒီ့အတွက် ကျနော်ပြောသမျှကို လက်ခံ သဘောတူစရာမလိုပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ အစကတည်းက ကွဲလွဲမယ့်သူတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ စဉ်းစားမိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ကွဲလွဲသူတွေရှိသလို ယုံကြည်လက်ခံလို့ ပူးပေါင်းပါဝင်နေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပိုင်ခွင့်တွေကို ကျနော်ယုံကြည်တဲ့အလျောက် အခုကတည်းက စတင်ကျင့်သုံးနေတာမျှသာဖြစ်ပါတယ်။
“ငါသိတယ်၊ ငါတတ်တယ် ဆိုတဲ့ ငါဆရာကြီးဆိုတဲ့ အထာနဲ့ ပြောနေလို့ကတော့” ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်ရေးပြီဆိုကတည်းက ကိုယ်သိသလောက်ကိုပဲ ရေးနိုင်တာပါ။ ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်သူမှ သူသိတာ၊ သူတတ်တာထက် ပိုမရေးနိုင်ဘူးဆိုတာကို သတိချပ်သင့်ပါတယ်။ ကျနော့်ထက်ပိုသိ၊ ပိုတတ်တဲ့ လူတွေလည်း မြန်မာတွေထဲမှာ အပုံကြီးနေမှာပါ။ အဲသည်အထဲမှာ မိတ်ဆွေတို့ ပါရင်လည်း သိတဲ့အလျောက်၊ တတ်တဲ့အလျောက် မသိသေးတဲ့လူတွေ၊ မတတ်သေးတဲ့လူတွေ သိအောင်ရေးကြပါ။ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ မက်ဆေ့ခ်ျ (Message) တခုကို တဦးတယောက်ကနေ တခြားတယောက်ကို ပေးတဲ့နေရာမှာ “ရိုင်းတာတွေ၊ ယဉ်ကျေးတာတွေ၊ မာတာတွေ၊ ပျော့တာတွေ” စတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်တွေထက် ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျရဲ့ အနှစ်သာရကိုပဲ ကြည့်တယ်။
နောက်ဆုံးအချက်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ မပါဝင်သူများကို အပြစ်တင်သလားဆိုတော့… နိုင်ငံသားတာဝန်ကို သိလျက်နဲ့ ရှောင်လွှဲနေသူများကို အပြစ်တင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျနော့်သဘောထားပါ။ မကြိုက်ချင်လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုအပြစ်တင်တာ ကျနော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချိုကစလို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း အပြစ်တင်ကြတာပဲ။ ဗိုလ်ချု့ပ်အောင်ဆန်းကျတော့ ပြောသင့်တယ်။ အခြားလူတယောက်က ဒီစကားကိုပဲ ပြောရင်တော့ မပြောသင့်ဘူးဆိုတာ တရားနည်းလမ်းမကျပါဘူး။ မှန်ကန်တယ်၊ အကျိုးရှိတဲ့စကားဆိုရင် ဘယ်သူပြောပြော နာယူသင့်ပါတယ် ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်ကြီးဆိုရင် သင်္ကန်းရုံတဲ့နေရာမှာ အ၀န်းအ၀ိုင်းမညီဘူးလို့ ဝေဖန်တဲ့ သာမဏေလေးရဲ့ စကားကို နာယူတဲ့ သာဓက ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း လူကြိုက်များမယ့် စကားလေးတွေကို ရွေးချယ်ပြီး စိတ်မပါဘဲ ရောယောင်ပြောနေမယ့်အထဲမှာ ကျနော်မပါဘူး။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်းပဲ အရင်းအတိုင်း ရိုးသားစွာ ပြောနိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး အားထုတ်နေတယ်။
လူတွေလက်ခံနိုင်မယ့် အယူအဆတွေကိုပဲ ပြောကြားပြီး စည်းရုံးရမယ်လို့ ယူဆသူတွေကိုလည်း ကျနော်မပိတ်ပင်ပါဘူး။ မိမိတို့ ယုံကြည်တဲ့အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ ယုံကြည်တဲ့နည်းနဲ့ လူတွေကို စည်းရုံးနိုင်လို့ ၂၁၀၀ မတိုင်ခင် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရတယ်ဆိုလည်း ကျနော် ၀မ်းသာမှာပါ။ ဆက်လုပ်ကြပါ။
ဒါပေမယ့် ကျနော့်ကို ဘယ်လိုရေးရမယ်၊ ဘယ်ပုံရေးရမယ် စသဖြင့် လာရောက် ဖိအားပေးတာမျိုးကိုတော့ ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ဒီဘလော့ဂ်ကို ထောင်ကတည်း လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မိလို့၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုချင်လို့၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ချင်လို့ ဘလော့ဂ်ရေးတာပါ။ သူများဆန္ဒနဲ့ ရေးသားဖို့ကို လုံးလုံးဆန္ဒမရှိပါဘူး။